ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမားဘ၀ မှာ ခေါင်းတိုက်ဂိုး ၁၀၀ ပြည့်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို — Sports Myanmar
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမားဘ၀ မှာ ခေါင်းတိုက်ဂိုး ၁၀၀ ပြည့်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို
May 4, 2019 May 4, 2019 - by Edi Tor
ဂျုဗင်တပ် နဲ့ ပေါ်တူဂီ တိုက်စစ် မှုးကြီး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို က တော့ သူ့ရဲ့ ပရော် ဖက်ရှင် နယ် ဘောလုံး ကစား သမား ဘ၀ တစ်လျောက် မှာ ခေါင်းတိုက် သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုး ပေါင်း ၁၀၀ ပြည့်မြောက် သွားခဲ့ ပြီပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒါဟာ အခြား ဘောလုံး သမားတွေ လိုက်မီ ဖို့ ခက်ခဲ လှတဲ့ မှတ်တမ်း စံချိန် ကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပြိး ရိုနယ်ဒို အနေနဲ့ ဒီ လို စွမ်းဆောင် နိုင်မှု အတွက် ဂုဏ် ယူနေ မှာ သေချာ ပါတယ် ။
Juventus’ Portuguese forward Cristiano Ronaldo goes foraheader during the Italian Serie A football match Juventus vs Parma on February 2, 2019 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
ရိုနယ်ဒို ဟာ ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့ တဲ့ ဂျုဗင်တပ် နဲ့ တိုရီနို အသင်း တို့ ရဲ့ ပွဲစဉ် မှာ အိမ်ရှင် အသင်း အတွက် ချေပဂိုး ကို သွင်းယူ ပြိး ကစား သမား ဘ၀ တစ်လျောက် ၁၀၀ ကြိမ် မြောက် ခေါင်းတိုက် သွင်းဂိုး ကို ရယူ ပိုင်ဆိုင် သွားခဲ့ တာဖြစ် ပါတယ် ။
စီးရီးအေ မှာ ဗိုလ်စွဲ ထားပြီး ဖြစ်တဲ့ ဂျုဗင်တပ် ဟာ အိမ်ကွင်း မှာ ချန်ပီယံလိဂ် မျှော်လင့် ချက် ရှိ နေဆဲ ဖြစ် တဲ့ တိုရီနို ကို လက်ခံ ကစား ခဲ့ပြီး ဧည့်သည့် အသင်း ရဲ့ ဦးဆောင် ဂိုး ကြောင့် နောက် ကနေ လိုက်ပြီး ကစား ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒုတိယ ပိုင်း ၈၄ မိနစ် မှာတော့ ရိုနယ်ဒို က ခေါင်းတိုက် ပြီး ချေပ ဂိုး ပြန်လည် သွင်းယူ ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီ ဂိုး ကြောင့် ရိုနယ်ဒို ဟာ ပရော် ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံး သမား ဘ၀ တစ်လျောက် ခေါင်းတိုက် သွင်းဂိုး ၁၀၀ ပြည့် မြောက် သွားစေခဲ့ ပြီး ဂျုဗင်တပ် ကိုလည်း ရှုံးနိမ့် မယ့် အရေး ကနေ ကယ်တင် ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ဂိုး ကြောင့် တိုရီနို ရဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် မျှော်လင့်ချက် ကလည်း ကုန်ဆုံး သွားခဲ့ ရ ပါတယ် ။
Torino’s defender Bremer Gleison from Brazil vies with Juventus’ Portuguese forward Cristiano Ronaldo (R) during the Italian Serie A football match Juventus vs Torino on May 3, 2019 at the ‘Allianz stadium’ in Turin. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
အရပ် ၆ ပေ ၂ လက်မ ရှိတဲ့ တိုက်စစ် မှုးကြီး ဟာ သူ့ရဲ့ အမြင့် ခုန် နည်းစနစ် ကြောင့် လေထဲ မှာ ပြိုင်ဘက် တွေ ကို အကြိမ်ကြိမ် အသာစီး ရယူနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို ရဲ့ အမြင့်ခုန် နဲ့ ခေါင်းတိုက် စွမ်းရည် တွေ ဟာ သူ့ ကို ထိပ်တန်း တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦး ၊ အဆုံးသတ် ကောင်း သူ တစ်ဦး ဖြစ်လာ စေခဲ့တဲ့ အရာ တစ်ခု ဆိုရင် လည်း မမှား နိုင် ပါဘူး ။
ရိုနယ်ဒို ဟာ ဒီရာသီ မှာ ကောင်းမွန် တဲ့ ခေါင်းတိုက် သွင်းဂိုး တွေ ကို သွင်းယူ ပေးထားခဲ့ ပြီး ဖြစ် ပါတယ် ။ အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် နဲ့ ကစားခဲ့ တဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ၁၆ သင်း အဆင့် ဒုတိယ အကျော့ မှာ ၂ ဂိုး ၊ အိုင်ယက်စ် နဲ့ ကွာတား ဖိုင်နယ် ပထမ အကျော့ မှာ လှပ တဲ့ ခေါင်းတိုက် ဂိုး တွေ ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ ရိုနယ်ဒို ဟာ ယမန်နေ့ ညက ပွဲ အပြီး မှာတော့ ခေါင်းတိုက် ဂိုး ရာပြည့် သွားခဲ့ ပြီဖြစ် ပါတယ် ။
ပရျောဖကျရှငျနယျ ကစားသမားဘဝ မှာ ခေါငျးတိုကျဂိုး ၁၀၀ ပွညျ့မွောကျသှားပွီဖွဈတဲ့ ခရစ်စတီယာနို ရိုနယျဒို
ဂြုဗငျတပျ နဲ့ ပျေါတူဂီ တိုကျစဈ မှုးကွီး ခရစ်စတီယာနို ရိုနယျဒို က တော့ သူ့ရဲ့ ပရျော ဖကျရှငျ နယျ ဘောလုံး ကစား သမား ဘဝ တဈလြောကျ မှာ ခေါငျးတိုကျ သှငျးယူ ခဲ့တဲ့ သှငျးဂိုး ပေါငျး ၁၀၀ ပွညျ့မွောကျ သှားခဲ့ ပွီပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ ဒါဟာ အခွား ဘောလုံး သမားတှေ လိုကျမီ ဖို့ ခကျခဲ လှတဲ့ မှတျတမျး စံခြိနျ ကောငျး တဈခု ဖွဈပွိး ရိုနယျဒို အနနေဲ့ ဒီ လို စှမျးဆောငျ နိုငျမှု အတှကျ ဂုဏျ ယူနေ မှာ သခြော ပါတယျ ။
ရိုနယျဒို ဟာ ယမနျနေ့ ညက ကစား ခဲ့ တဲ့ ဂြုဗငျတပျ နဲ့ တိုရီနို အသငျး တို့ ရဲ့ ပှဲစဉျ မှာ အိမျရှငျ အသငျး အတှကျ ခပြေဂိုး ကို သှငျးယူ ပွိး ကစား သမား ဘဝ တဈလြောကျ ၁၀၀ ကွိမျ မွောကျ ခေါငျးတိုကျ သှငျးဂိုး ကို ရယူ ပိုငျဆိုငျ သှားခဲ့ တာဖွဈ ပါတယျ ။
စီးရီးအေ မှာ ဗိုလျစှဲ ထားပွီး ဖွဈတဲ့ ဂြုဗငျတပျ ဟာ အိမျကှငျး မှာ ခနျြပီယံလိဂျ မြှျောလငျ့ ခကျြ ရှိ နဆေဲ ဖွဈ တဲ့ တိုရီနို ကို လကျခံ ကစား ခဲ့ပွီး ဧညျ့သညျ့ အသငျး ရဲ့ ဦးဆောငျ ဂိုး ကွောငျ့ နောကျ ကနေ လိုကျပွီး ကစား ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒုတိယ ပိုငျး ၈၄ မိနဈ မှာတော့ ရိုနယျဒို က ခေါငျးတိုကျ ပွီး ခပြေ ဂိုး ပွနျလညျ သှငျးယူ ပေးသှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီ ဂိုး ကွောငျ့ ရိုနယျဒို ဟာ ပရျော ဖကျရှငျနယျ ဘောလုံး သမား ဘဝ တဈလြောကျ ခေါငျးတိုကျ သှငျးဂိုး ၁၀၀ ပွညျ့ မွောကျ သှားစခေဲ့ ပွီး ဂြုဗငျတပျ ကိုလညျး ရှုံးနိမျ့ မယျ့ အရေး ကနေ ကယျတငျ ပေးသှားခဲ့ ပါတယျ ။ ရိုနယျဒို ရဲ့ ဂိုး ကွောငျ့ တိုရီနို ရဲ့ ခနျြပီယံ လိဂျ မြှျောလငျ့ခကျြ ကလညျး ကုနျဆုံး သှားခဲ့ ရ ပါတယျ ။
အရပျ ၆ ပေ ၂ လကျမ ရှိတဲ့ တိုကျစဈ မှုးကွီး ဟာ သူ့ရဲ့ အမွငျ့ ခုနျ နညျးစနဈ ကွောငျ့ လထေဲ မှာ ပွိုငျဘကျ တှေ ကို အကွိမျကွိမျ အသာစီး ရယူနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ရိုနယျဒို ရဲ့ အမွငျ့ခုနျ နဲ့ ခေါငျးတိုကျ စှမျးရညျ တှေ ဟာ သူ့ ကို ထိပျတနျး တိုကျစဈမှုး တဈဦး ၊ အဆုံးသတျ ကောငျး သူ တဈဦး ဖွဈလာ စခေဲ့တဲ့ အရာ တဈခု ဆိုရငျ လညျး မမှား နိုငျ ပါဘူး ။
ရိုနယျဒို ဟာ ဒီရာသီ မှာ ကောငျးမှနျ တဲ့ ခေါငျးတိုကျ သှငျးဂိုး တှေ ကို သှငျးယူ ပေးထားခဲ့ ပွီး ဖွဈ ပါတယျ ။ အသကျလကျတီကို မကျဒရဈ နဲ့ ကစားခဲ့ တဲ့ ခနျြပီယံ လိဂျ ၁၆ သငျး အဆငျ့ ဒုတိယ အကြော့ မှာ ၂ ဂိုး ၊ အိုငျယကျဈ နဲ့ ကှာတား ဖိုငျနယျ ပထမ အကြော့ မှာ လှပ တဲ့ ခေါငျးတိုကျ ဂိုး တှေ ကို သှငျးယူခဲ့တဲ့ ရိုနယျဒို ဟာ ယမနျနေ့ ညက ပှဲ အပွီး မှာတော့ ခေါငျးတိုကျ ဂိုး ရာပွညျ့ သှားခဲ့ ပွီဖွဈ ပါတယျ ။